SOMCARE oo shir balaaran ku qabatay Galbeedka London.
Tuesday January 19, 2010 - 07:36:44 in Community Listing by Super Admin
Urur Samafal oo daryeela Carruurta Soomaaliyeed ayaa shir aad u balaadhan ku qabtay xaafada Wembley ee galbeedka magaaladan London.
dece:2 Source: Somalisan news
U jeedada kulankan loo qabtay ayaa ahaa mid kaalmo iyo tabaruc loogu ururinayo dadka dhibaataysan eeay la soo gudboonao xaalad adag oo caafimaad darro ah, taasoo dadka danyarta ahi ay yihiin qaar aan iyagu is daryeeli karin.
Intii kulankaasi uu socday waxa lagu soo bandhigay sawirro muujinaya dad ay haystay dhibaato caafimaad daro ah oo xooggan, kuwaasoo qaarkood lagu daweeyay wadamo ka mid ah geeska afrika, sida dalalka Kiinya iyo yugaandha iyadoo kuwii xoog u dhibaataysnaa ee Afrika lagu daaweyn kari waayayna loo qaaday dalka Maraykanka, iyadoo sawirradii halkaas lagu soo bandhigay ay tusayeen sida wanaagsan ee dadkaas loo daaweeyay.
Ururkan Daryeelka Carruurta Soomaalida oo la aasaasay sanadkii 2007 ayaa tan iyo intii ururkaasi uu hawl galay waxay wax u qabteen oo ay daaweyn u heleen 56 qof oo u badnaa carruur, dumar iyo rag waaweynba, kuwaasoo laga daweeyay cudurro kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Burooyin iyo xanuuno kala duwan oo dabiici ah oo dadkaasi kala duwan haystay.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne farabadan oo ka kala yimid daafaha magaaladan London ayaa waxaa halkaasi hadalo dhiirri galin iyo Wacyigalin isugu jirta kasoo soo jeediyay masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Marwo Mulki Xasan Cumar, Faarax Ibraahim,Muuse Qaboobe,Maxamed Cabdiqaadir, RaxmaAhmed,
Bashiir Xirsi, Xasan Xundubey Jimcaale, Xaaji Muuse Masuul sare, Cali Jarmal, Kutuubey Cali Maxamed, iyo Culumo Xasan Matoto.
Xafladan oo socotay muddo dhawr saacadood ah marka laga tago haddaladdii iyo qudbadii laga soo jeediyay waxa kale oo lagu soo bandhigay erayo suugan ah oo lagu dhiirigalinayo waxqabadka ururkan,
Waxaa halkaas Wax qabadka ururkan ka soo jeediyay Gudoomiyaha Ururka Daryeelka Carruurta Soomalida Dr. Cabdicasiis Muuse Maaxay. Digtoorka oo waxyar ka taabtay sida ay ku bilaabeen Ururkan Samafalka ah ayaa sheegay in isaga iyo gabadhiisa oo wada daawaynay cajalad laga soo duubay dalkii oo ka waramaysay gabadh yar oo dad faro xumayeen oo baahan ila laga daweeyo dhibaatadda laaxadka leh ee ku habsatay, ayay gabadhaydu igu dhiiri galisay in aan wax u qabto , waxayna ku soo suurgashay iskaashi aan la sameeyay dad dakhtiir ah iyo dad Soomaliyeed oo dhaqaale ku tabarucay, Allah mahadi haka gaadhee waa idinkaas arka sida ay u caafimaaday inantaas yari ayuu yidhi Digtoorku.
Dhanka kale ururkan oo wali ku gudajira lacagta tabaruc ee ay ururinayaan ayaa dhawaan kale hadlay dadka soomalida Televison UNIVERSAL iyaga ugu baaqay in ay tageeran arrinta khayriga ee ay wadaan, iyadda durtaba ay ka soo jawaabeen dad fara badan iyo shirkadda soomalida qaarkood ayaa shirkadda dahabshiil ugu deeqday lacag dhan 10,000 Dollar.
Fadlan hadii aad awoodid inaad noqotid inaad ka qayb qaadatid barnaamijkaan uguna deeqi kartid ama $10 dollars $5 dollars ama $20 dollars fadlan ha is dhihin
way yartahay waxay wax ka badeli kartaa wax wayn
Fadlan ku soo dir deeqdaada DAHABSHIIL ACCOUNT Number HRG-D-15315 amaba
isticmaal www.somcare.org dhinaca deeqaha ee Paybalkeena.
Mahadsandiin ilaahay waxaan ka baryayaa in wax ka wayn idiinku badelo.
Refrece:www. Somalisan.com oo aan ka soo qaadaney Qoraalkan
Muse waxuu ka mid yahay shaqsiyaadka gaarka oo wax wayn ka gastey barnaamijkaan.
Amino Awciise oo ka qayb qaadatay barnaamijkaan
Binti Jaylaani maanta waa Advocate
Safarkii Maaxaay Kenya
Macalinka oo buradiisa laga qaley